Ice Cube Man Vs Machine: Kutanga Nenguva Itsva NFT Drop
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Ice Cube Man Vs Machine: Kutanga Nenguva Itsva NFT Drop
Nhasi, mutambi, varaidzo mogul uye BIG3 muvambi Ice Cube akazivisa kuti yake yega yekutanga kudonha kweNFT, Man VS Machine yakavhara nechero edition yakatengeswa mukati meawa isingasviki makumi maviri nemana.
Kudonhedza, kudyidzana nevanozivikanwa muimbi Trevor Jones uye NFT Marketplace Nifty Gateway, yaive imwe yeakanyanya kubudirira munhoroondo yepuratifomu, ichiita mari inodarika $1.6 Miriyoni. Paive nekufarira kukuru kune ese edition, aine zvinyorwa zveimwe neimwe zvichisvika pamwero unoshamisa.
• The 12 Gold Edition NFT's ($15,000 imwe neimwe) yakawana zvinodarika mazana mana edition imwe neimwe.
• The 40 Silver Edition NFT's ($5,000 imwe neimwe) yakawana zvinodarika 1000 edition imwe neimwe.
• The 100 Bronze Edition NFT's ($2,000 imwe neimwe) yakawana zvinodarika 2000 edition imwe neimwe.
• The Open Editions, inongowanikwa kune vane mifananidzo yaTrevor yapfuura, yakatengesa zvinyorwa zvinopfuura 12,000.
Uku kudonha kweNFT chikamu chekuedza kukuru kweIce Cube kuenderera mberi kuvepo mune zvese nyaya uye maindasitiri ane chekuita netsika nhasi. Kubva pakukurudzira kumiririrwa muindasitiri yemafirimu, kukura BIG3 basketball ligi, uye kuve mutori wechikamu mune metaverse, Ice Cube inoramba iri mutungamiri mumaindasitiri.
Iyo NFT's kubva kuMan vs Machine icharamba ichirarama paNifty Gateway chikuva uye varidzi vega vanogona kusvikirwa kuti vatengeswe. Iwo editions mumusika wechipiri akatotenda nechina- kana kashanu uye akatengesa imwe madhora miriyoni.